China GD-EMB-015: Magetsi bhasikoro, 36V250W, 27.5 inch, ShimanoTY300, mechanical disc brake fekitori uye vagadziri | GUODA
GD-EMB-015: Magetsi bhasikoro, 36V250W, 27.5 inch, ShimanoTY300, mechanical disc brake
Mechanical disc yakaputsa
6-pombi inotsvedza yakabatanidzwa mutungamiriri
Mechanical kukiya uye kuvhunduka Absorção de ofgua aruminiyamu papfudzi
Micro tendeuka 7 yekumhanyisa dial
Matipi: Chigadzirwa chinotsigira tsika Ruvara, mota, bhatiri, Brand mazita, Logo nevamwe. (OEM & ODM)
GuoDa Electric Mountain Bike # GD-EMB-015
SKD 85% gungano, imwe yakatarwa pamatoni egungwa
Pashure: GD-EMB-014: Inesimba yemagetsi gomo bhasikoro, 36V 250W, kumashure kwakakwira mota, alloy furemu
Zvadaro: GD-EMB-016: Magetsi bhasikoro, 27.5 Inch, LED mita, yepakati yakakwira mota, yakavakirwa-mukati bhatiri
3. Kana pasina bhasikoro iwe raunofarira pawebhusaiti yedu, gamuchira kuti utitane nesu kuti zviitwe zvakagadzirirwa.
Yedu Electric Mountain Bike (e-MTB) inogadzirwa kuzadzisa chishuwo chevatyairi chekuenda kure, kuenda nekukurumidza, uye kuwana ruzivo rwepamusoro. Iyo yakavakirwa panhaka yekusimbiswa furemu uye kumiswa tekinoroji. Magetsi-anobatsira emabhasikoro anowedzera simba rako rekukwevera uku uchiwedzera huwandu hwemafaro auchazova nawo munzira. Aya ndiwo e-mabhasikoro anoita kuti iwe unakidzwe nezvakawanda zvezvinhu zvese zvinoita makomo kuchovha.
Paunotasva bhasikoro remagetsi, hapana rwendo rwakareba, hapana mutoro unorema, uye hapana nzvimbo makumbo ako asingakwanise kukutakura. Sunga jamu rekufamba kwezuva nezuva, wedzera kurovedza muviri, uye unzwe kunakirwa nekutsika zvishoma pasi. Uye kupfuura zvese-pfuura nemugwagwa.
200-500W Yakachipa Bhasikoro
27.5 inches emagetsi bhasikoro kutengesa kupisa
yakavakirwa-mukati bhatiri yemagetsi bhasikoro
Cheap Electric Bike Kutengesa
E Bhasikoro China
e-bhasikoro ine disc brake
e-bhasikoro ine LED Mter
Magetsi Gomo Bhasikoro
Yakakwira Simba Magetsi Bike
Mountain Bike neMagetsi
Gomo E Bhasikoro
Mountain Electric Bhasikoro